FIKIRKA DHALINYARADDA IYO MUSTAQBALKOODA. pilot
Salaaan wacan dhamaanba Akhritayaasha meelay joogaanba,
Bilowga mowduucaygan waxaan hordhac ugu dhigayaaa dhowr weydiimood oo war-celintooda looga baahan yahay wax-garadka iyo
aqoonyahanka somaliyeed waxaana ku raja weynahay in ay saxaafadda madaxa banaan iyo mida gaarka loo leeyahayba ay xaqiiqda su,aalahaaan uu soo bandhigaan dadweynaha,Qof walbane xor ayuu uu yahay in uu rayigiisa ku cabirro sidey ulla muuqdaaan isagga oo cidna garab sareyn::::: Hadaba anoo dadkaas ka mid ah ayaan hadane qoraalo kale kaga jawaabi doonaa su,aalahaan aan hada soo bandhigi doona..
Hadaba su,aalaha waxaay kale yahiin sidaaaan?
1) Hadafkii siyasadeed ee SNM Muxuu ahaa xiligii dagaaalkiii kulla
jireeen siyaad bari??????
2)Isla markaaas hadafkoodu ma ku jirtay gooni usu taaag????
3)Markiiii ay mustaxiil ku kulmeen sadexda jabhadood ee USC;SSDF, Ma soo jeedisay SNM In haddii dalka la xoreeyo ay goosanayaaan noqonayaaan dowlad madax banaan???
4)Qaladkii dhacay 1july 1969 ma waxaa saxay 18 may 1991??????!!
Hadaba aqristoow su,aalahaan ayaa uu bahan in laga dooda intaad daba carari lahadeen wiil idinka magac dheer idinkane caansan!!!!!!
Hadab aniga pilot ahaan waan ka jawaabi doonaa su,aashan aan dadka ugu soo bandhigay rayiga aan maanta qabbo....
Afarqooble muxuu yiri mooyi?
Aqristoow aan uu soo gallo maqaalkaan qaybihiisa kale duwan oo aan ku bilaawe... Dunidda aanu maanta ku noolnahay waxaa jira maamullo aad uu fara badan oo mid kastaaaba uu higsanayo hurumar ballaadhan, Tasooo midba taagtiisu meeshay dhigtay uu rafanayo,In kastoo dadaaal iyo hurumar balaadhan ay ugu jiraan
Sidii ay uu noqon lahayeen Wadamo dhinac walbo iasagga filann
Iyagga oo adeegsanaya kolba xeeladda siyasadeed ee ay dan moodaan iayagga oo marba hogaankooda uu dhiibanaya jiilal kale
duwan, Ha ahaato odayaal amaba dhalinyarro waayo aragg ah oo la
jaan-qaada hadba marxaduhu sideey yahiin, Kuwaas oo aaqirka ku guuleeysta amaba ku khaatuma xumeeeystaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hadaba sideynu wadda agsoonahay caalamka intiisa badani maanta waxaa hogaanka iyo taladda wadamadooda uu haya ragg dhalinyarro ah oo jaamiciyiin ah,iyagga oo odeyaasha ka dhaxleen
waaya aragnimo dheeraad ah, Balse aanay waayeelka ku cidhiidhin
dhalinyadda fursadooda.Balse anay waqtigooda ugaga faaiideeyaan
hurumarka wadankooda iyo tayadda aqooneed,tiknolojiyadeed amaba mida dibloomaasiyadeed tasoo jiilba jiilka ka danbeeya ku riiri galiso inuu bari ka maalin memberka hogaaminta dalka uu ku yara nagaan doona. Taas oo haddii dadkiisu raali ka noqon wayaan
oo si sharaf leh xilka ugu daggo oo aanu sii jeclaysan kursigga ilaa inta uu ka dhimanayo. Hadaba waxaa qarnigii ina dhaafay daboyaqadiisii Afarika ka dhacay isbedel aan hore loo aragg.Kaas oo qaar ka mid ah madaxda afrika ugu caansanaa ay si sharaf leh xukunka dalalkooda ugu wareejiyeen niman dhalinyarro ah. Taas oo caalamka ka yaabisay, Waayo hore looma aragg wadan afrikaan ah oo sidaa yeelay wadankaasna tusaale ahaan waa konfur afrika:::::.
Hadaba aqristoooow inta aan ka bixin qoraalka ayaan jeclahay nin mareykanka jooga oo isagga wax ku qora shabakadaha ama netka
ninkaas waxaayabaha uu ka hadlaaya sabata ku kaliftay ayaan is iri
koleey cali pilot ayuu doonayaa inuu isku soo caanbixiyo oo ma yaqaano meelo kale inuu ka hadlo oo maalin walbo waxuu leeyahay
pilot baa sodaa yiri ama fulaan fulaan. Hadaba ninkaas waxaa uu fiican intuu is qarin lahaa inuu magaca toos uu abaaro.
Dhinaca kale su,aalaha xagga sare ku qoran ee ku saabsanaa reer somaliland. Jawaabta qof kastaa waa uu furan tahay anigane jawaab ayaan isku dayayaa inaan soo kooba jawaabtooda::::::::
Karaama dhacii SNM:::::::
Run ahaantii beentu waa geed kama gudbaaan . Xaqiiqduna waxaay tahay SNM hadafkeeda siyyaasadeed waxuu ahaa sidii ay taladda dalka soomaliya ay ugu tuuri lahayeeen Qowleystihii siyaad
uguna soo dabaali lahayeen dowlad rayid ah. Qorshayashooda siyasadeed ha ahaato mid dadban ama mid toosane kumaay jirin wax gooni usu taag ah , Aaminsanaantooduna waxaay ku noqotay
in ay taladda ka tuuraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannn
siyaaad bari . Mar haddii shacbiga reer somaliland ay go,aaan ku gaadheen aayo ka talintooda iyo la soo noqoshadda dowladii aaay
fooool-halaabiyeeeen lixdankiiiiii. Taaas oo waliba aan la soo noqoshadani cilmiyeysnayn lana mid ahayd tii lixdankiii::::::::::
Waaayo? Maah maah soo jireen ah oo sooomaliyeeeed ayaa tidhaaa ((( Gacantaadu haddii ay surun sur gasho laguma dhuftee waa laga dhiraan dhirayaaa))))::: Taaasna run ahaantii ku dheeraaaaan maayo oo wax tagey tiigsimaad ma leh.. Qadar dhacayna kun sanno ayuuu kaa weyn yahay:::::::::::::::::::::::::::
Aqristooow qoraalkii maanta intaas ha inoo joogga balse intaan dib uu kulmi doonna waxaaan idiin leeyahay dhamaantiinba nabadeeyy.